बिक्री भयो नाडा अटो शोमामा राखिएको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको सबैभन्दा महँगो बाइक ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्यबिक्री भयो नाडा अटो शोमामा राखिएको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको सबैभन्दा महँगो बाइक !
बिक्री भयो नाडा अटो शोमामा राखिएको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको सबैभन्दा महँगो बाइक !
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार प्रकाशित
काठमाडौं । राजधानीमा हालै सम्पन्न नाडा अटो शोमा प्रदर्शनीमा राखिएको सबैभन्दा महँगो मोटरसाइकल बिक्री भएपछि सबैको मनमा प्रश्न उठ्यो, ‘आखिर यो बाइक किन्यो कसले ?’किनकी कम्पनीले बिक्री भएको सूचना त दियो तर खरिद गर्नेको नाम उल्लेख भने गरेन वा गर्न चाहेन । ती खरिदकर्तालाई तत्कालै भाइरल हुनु थिएन, सायद ।एमभी अगस्टाको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक भेलोसिटी प्रालिले नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गरेको लेविस ह्यामील्टनको ७३ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्य रहेको बाइक थियो त्यो ।
एमभी अगस्टा ब्रुटेल ८०० आरआर एलएच ४४ लिमिटेड एडिसन बाइक संसारभर मात्रै १ सय ४४ युनिट निर्माण गरिएको छ । जसमध्ये दक्षिण एसियामै आएको यो एकमात्र एक युनिट थियो ।मोटरसाइकल नाडा अटो शोमा प्रदर्शन गरियो ।त्यसो त यो मोटर साइकल भेलोसिटी प्रालिले नेपाल ल्याएपनि खरिदकर्ताको टुंगो पहिले नै लागिसकेको रहेछ । यही चैत मसान्तमै खरिदकर्ताले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा यो मोटरसाइकलको फोटो राख्दै क्याप्सन लेखेका थिए, ‘सि यू सुन ।’ यसको अर्थ त्यस समयदेखि नै ती व्यक्तिले यो बाइक किन्ने निधो गरिसकेका रहेछन् ।
तर, यतिखेर खरिदकर्ताले सोही इन्स्टाग्राम एकाउन्ट र फेसबुकमा यो मोटरसाइकललाई आफ्नो कलेक्सन सेन्टरमा राखेको भन्दै तस्बीर सार्वजनिक गरे । नेपाल ड्राइभ्सले खिचेको तस्बीर उनले राखेपछि चर्चा सुरु भएको हो ।७४ लाखको मोटरसाइकल किन्ने अरु कोही नभएर सौरभ ज्योति हुन् । धनाढ्य ज्योति परिवारका सौरभ सवारीसाधनका सौखिन हुन्, विशेष गरी मोटरसाइकलको । १४ वर्षकै उमेरमा उनले मोटर साइकल चलाउन सिकेका थिए । त्यसबेला होण्डाको सिडी र बेन्ट्ली मोडल थिए ।सौरभको स्याकार ट्रडिङ नेपालका लागि होन्डाको आधिकारिक विक्रेता हो ।
उनीसँग होन्डा र अन्य सबै कम्पनीका मोटरसाइकलको कलेक्सन छ ।लिमिटेड प्रोडक्टमा उनको विशेष रुची छ । मोटो जिपी जितेको एउटा बाइक होण्डाले ‘लिमिटेड प्रोडक्ट’ निकालेको थियो । विश्वभरमा तीन सय वटाको हाराहारीमा निकालिएको त्यो मोटर साइकल उनले किन्न पाएका थिएनन् । सो बाइक इतिहासकै सबैभन्दा महँगो बाइक हो, जसको एक करोड रुपैयाँ पर्छ ।गाडी किन्न औसत मूल्यमा सुपर बाइक आउने भएकाले पनि उनलाई मोटरसाइकलमा रुची लागेको हो । उनी बाइक किन्नेमात्र होइन, मर्मत गर्न पनि सौखिन छन् ।
तिनै सौरभले आफ्नो कलेक्सन पोइन्ट एसजे मोटोमा राखेको भनेर लेविस ह्यामिल्टनको १० वटा तस्बीर सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, “मेरो कलेक्सनमा अर्को टोय थपियो ।”फर्मुला १ च्याम्पियन लेविस ह्यामील्टनसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको यो मोटरसाइकलमा युरो फोर इनलाइन थ्री–सिलिन्डर इन्जिन लगाइएको छ । अन्य मोडलको तुलनामा प्राविधिक रुपान्तरण सहित ल्याइएको यस मोडलमा उपलब्ध इन्जिनले १४० हर्सपावर उत्पादन गर्छ भने प्रतिघन्टा २४४ किलोमिटर प्रतिघन्टाको अधिकतम गतिमा कुद्न सक्छ ।
यसमा कम्प्याक्ट र लाइटवेट डबल च्यानल एबीएसको विशेषता दिइएको छ । यसले फ्रन्ट र रियरमा दिइएको ब्रेकको प्रभावलाई कम गर्ने गर्छ । कार्बन फाइबर कम्पोनेन्ट दिइएको छ भने, क्रेमिक बेस कोटिङ गरिएको छ ।यसमा उपलब्ध ब्रेक, क्लच लिभर, फ्लुड रिजर्भर क्याप, लाइटवेट अलोय बिलेट कार्बन फाइबरबाट बनेको हो । बाइकमा ट्यांक क्याप, इन्जिन आयल फिल्टरक्याप, क्लच कभर गार्ड र अल्टरनेटर गार्ड लगायतका विशेषता पनि छन् ।